Lacag Dowladeed oo loogu talagalay waxbarashada ilmahaaga
Waad ogtahay in waxbarashadu muhiim u tahay guusha mustaqbalka ilmahaaga, laakiin ma hubtid sidii aad u bixin lahayd. Habka ugu wanaagsan ayaa ah adiga oo hubiya in ilmahaagu helo lacag bixinta Dowladda laguna heli karo iyada oo loo maro Qorshaha Ukeydiska Waxbarashada Diiwaangashan (RESP).
Dowladda ayaa siisa qoysaska Bondka Waxbarashada Kanada (Canada Learning Bond). Waxay si toos ah ugu gali doontaa Qorshaha Ukeydiska (RESP) ilmahaaga xitaa haddii aadan haysan lacag aad ku biiriso laftaadu. Dowladda ayaa waliba lacag kuugu dari doonta wixii kasta ee aad keydsan karto.
SmartSAVER ma iibiso Qorshayaasha RESP ama maalgashiyada. SmartSAVER waa mashruuc beeleed samafal ah oo ka caawisa qoysasku inay bartaan sida loo bilaabo RESP iyo sida loo helo lacagta Dowladda ee loogu talagalay waxbarashada carruurta waxa ka dambeeya dugsiga sare.